Yaa loo qabtey kufsi foolxun oo lagula kacay haweenay 85 jir ah - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yaa loo qabtey kufsi foolxun oo lagula kacay haweenay 85 jir ah
Yaa loo qabtey kufsi foolxun oo lagula kacay haweenay 85 jir ah oo ku nool xero barakaca oo u taal magaalada Jowhar. Kufsiyada ka dhaca xeryaha barakaca waxa inta badan lagyu eedeeyaa inay gaystaan askarta ilaalada. Ma jiro ciqab adag oo lagu xanibo dhalintan wareersan ee dad dhibaateysan sii dhibaateynaya.
“Waxba kama jiraan in ay yihiin askarta dowladda kuwa kufsiga geystay balse waa dad isticmaalay waxyaabaha maanka dooriyo,waxaan idiin sheegayaa in aan heyno lix dhalinyaro ah oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyaan kufsigaas oo aan baaritaan ku heyno ayuu yiri Kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe ahna Guddoomiye ku xigeenka Arrimaha Siyaasadda.
Masuuliyiin ka tirsan degmada Jowhar ayaa haweenaydan ku booqdey isbitaal ku yaal Jowhar oo la geeyay. Kufsiga ka dhaca xerooyinka barakacayaasha ayaa faraha ka baxay waxana eeda iska leh dawlada oo u yeeliweysay ciqabo kulu sida dil toogasho ah ayuu yiri muwaadin ku nool xerada barakaca ee Jowhar.